ဖောက်သည်ထောက်ခံချက် | Roy Art ပန်းချီပြခန်း
ငွေတောင်းခံလွှာ # 910508
Yvonne ကို C
ငွေတောင်းခံလွှာ # T-1202013
အားလုံးကောင်းကောင်းမျှော်လင့်ပါတယ် နောက်ဆုံးတော့ဒီပန်းချီကားကိုယနေ့ရရှိခဲ့သည် ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးနောက်ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ခံစားသူကိုခံစားလိမ့်မယ် .... အနုပညာကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ငါ့နှမ။ ပတ်ပတ်လည်တောက်ပဝန်ဆောင်မှု။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုမှယောက်ျားတွေအကြံပြုလိမ့်မယ်
မင်္ဂလာပါ။ Imad Khan DUBAI AE
ငွေတောင်းခံလွှာ # 808059
မင်းကုမ္ပဏီမှငါမှာယူခဲ့သည့်လှပသောရေနံပန်းချီသည်ကျွန်ုပ်အားအဒေါ်အား ၉၀ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ပြီးသူမကအနည်းဆုံးပြောရသည့်အတွက် ၀ မ်းသာသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့စတစ်ကာများပါ၊ ဒီဟာငါအမြဲတမ်းဝယ်ယူခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါ။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမကြာမီမကြာခဏအမိန့်များပါလိမ့်မည်! ရိုးသားစွာဖြင့် Linda Lester, Gilroy, CA.
ငွေတောင်းခံလွှာ # 608036
"ငါ့ပန်းချီကားကိုဒီမွန်းလွဲပိုင်းမှာရောက်ပြီ။ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ မင်းရဲ့ယဉ်ကျေးရည်မွန်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကကျွန်မကိုဆက်ပြီးချိတ်ထားတယ်။ ငါထပ်မံမှာယူတော့မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်
Vicki Carl, Evanston, IL ။ "
ဒီပန်းချီကားသည်ယနေ့ရောက်ရှိနေသောကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သင့်ထံမှ ၀ ယ်ယူခဲ့သောပန်းချီကားအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တကယ်နှစ်သက်ပါသည်။ ဒါကငါတို့စုဆောင်းမှုကိုပိုမိုထည့်သွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သည်ရောင်းရန်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရွေ့လျားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းချီကားအားလုံးကိုသင့်ထံမှသေချာပေါက်ဝယ်ယူလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများစွာအားသင်၏ site အကြောင်းပြောပြပြီးပါပြီ။
ငွေတောင်းခံလွှာ # T-1112003
ဤသည်အလွန်အထူး Alizee အောင်ဘို့နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Vicki Dizney ။ ကွေး OR
ငွေတောင်းခံလွှာ # T-1112009
သငျသညျယောက်ျားတွေ Alizee လူတန်းစားလုပ်ရပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ပါတ်အကြာမှာအခြားအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တော့မှာပါ။ ခင်ဗျားရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်သဘောကျတယ်
ရေနံပန်းချီ ၊ ခေတ်ပြိုင်ရေနံပန်းချီ ၊ Stretcher Bars ၊ Abstract ရေနံပန်းချီ ၊ လူ့လက်ရေနံပန်းချီ ၊ ရေနံက Canvas တွင်ပန်းချီ ၊ ထုတ်ကုန်အားလုံး